नेपाल आईस खप्तड गोल्डकप आजदेखि – Everest Dainik
नेपाल आईस खप्तड गोल्डकप आजदेखि
कैलाली, पुस २१ । फुटबलमा सबैभन्दा बढी धनराशी भएको प्रतियोगिता धनगढी रंगशालामा शुक्रबार (आज)देखि सुरु हुँदैछ । निजी क्षेत्रको सर्वाधिक धनराशी पुरस्कार भएको ‘नेपाल आईस सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता-२०७४’ शुक्रबारदेखि धनगढी रंगशालामा सुरु हुन लागेको हो । प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सबै तयारी सकिएको बिहीबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
दिउँसो १ बजे धनगढीको क्षेत्रीय रंगशालामा प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कैलाली क्षेत्र नम्वर ५ बाट नेपाली कांग्रेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेकी डा. आरजु राणा देउवाले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
औपचारिक रुपमा उद्घाटन कार्यक्रमसँगै प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक सुदुरपश्चिम ११ स्पोर्टस क्लव र काठमाडौंको ए डिभिजन क्लव च्यासल युथ क्लवबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
दुबै टोलीमा विदेशी खेलाडीहरुको साथमा राष्ट्रिय खेलाडीहरुको बाहुल्यता रहेकोले उत्कृष्ट खेलको आशा खेलकर्मीले गरेका छन् ।
माघ १ गतेसम्म आयोजना हुने दोस्रो संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित नेपाल आईस सुदुरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको सबै तयारी सकिएको आयोजक सुदुरपश्चिम ११ स्पोर्टस क्लवका अध्यक्ष सुरेश हमालले जानकारी दिए । सबै तयारी सकिएर प्रतियोगिता उद्घाटनको तयारीमा बसेको प्रतियोगिताका संयोजक धुव्र भट्टराईले बताए ।
सम्बन्धित् समाचार अष्ट्रेलिया र पेरुबीचको खेल शुरु, को पुग्ला नकआउट चरण ?
खेल हुने धनगढी रंगशालालाई सजाईएको छ भने चारैतिर व्यानर सहितका प्रायोजकहरुका बोर्डले घेरेर राखिएको छ । मैदानमा सिंचाई गर्दै सम्याउने काम सकिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाईएको आयोजक क्लवका उपाध्यक्ष योगेन्द्र चन्दले जानकारी दिए ।
झण्डै ३ हजार ५ सय दर्शक क्षमताका दुईवटा प्याराफिट रहेको रंगशालामा पहिलो पटक अस्थायी प्याराफिट निर्माण गरिएको छ । झण्डै १५ सय दर्शक क्षमताको कृत्रिम प्याराफिट निर्माण गरी दर्शकहरुलाई फुटबल खेलको मज्जा लिने व्यवस्था मिलाईएको छ । मैदानको चारैतिर अस्थायी प्यारासफिट बनाएर खेल हेर्ने व्यवस्था मिलाईएको सुदुरपश्चिम ११ स्पोर्टस क्लवका महासचिव प्रकाश शाहीले बताए ।
सम्बन्धित् समाचार सेमिफाइनलमा प्रवेश चेल्सी
प्रत्येक खेलका म्यान अफ दि म्याचलाई १०÷१० हजारका दरले पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
प्रतियोगितामा टिकट काटेर खेल हेर्न जाने दर्शकहरुलाई प्रत्येक दिन गोलाप्रथाद्वारा मोबाईल प्रदान गरिने भएको छ । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक सिजी ग्रुपको नेपाल आईस ब्राण्ड र सह प्रायोजकमा नेपाल टेलिकम र जगदम्वा पाईप रहेको छ ।